“Cash Point tany Isoanala Vola sandoka no nomen’ilay ramatoa
Ramatoa iray no tra-tehaka nampiasa lelavola roa alina ariary sandoka miisa 6 ny 28 desambra 2019 tao Isoanala distrikan’i Betroka faritra
Anôsy. Naharay antso tamin'olona tsara sitrapo ny tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena ao Isoanala fa misy ramatoa iray nandrotsaka vola sandoka amin'ny kaontiny amin'ny "cash point" iray. Rehefa nojerena ifotony dia marina fa vola sandoka tokoa ny 6 amin'ireo 15 saika narotsany ka nosamborina avy hatrany ilay ramatoa sahabo ho 50 taona. Marihina fa vao nivoaka ny fonja tsy ela Ramatoa Isabelle noho ny raharaha fisandohana. Marihina ihany koa fa efa maro ny trangana vola sandoka tao Betroka sy Isoanala ka naseho teto sy nanentanana ny mponina any an-toerana.